Samia Hassan: Haweeney Muslim ah oo si aan la fileyn Madaxweyne uga noqoneysa dalka Tanzania | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Samia Hassan: Haweeney Muslim ah oo si aan la fileyn Madaxweyne uga noqoneysa dalka Tanzania
Madaxweyne ku xigeenka Tanzania Samiya Suluhu Hassan ayaa noqoneysa haweeneydii ugu horeysay ee dalkaasi madaxweyne ka noqota, haddana kasoo jeeda muslimiinta dalkaasi, kadib geeridii madaxweynaha John Magufuli.
Dastuurka dalka Tanzania ayaa qoraya in haddii xilka madaxweynaha uu bannaanaado sida geeri ku timaada Madaxweynaha kadib, xilkaasi loo dhaarin doono Madaxweyne ku xigeenka oo dhammeystiri doona in ka harsan muddo xileedka oo ah 5 sano.
Samia waa 61 sano jir, waxayna dhalatay sanadkii 1960-kii, waxayna kasoo jeedaa Gobolka is-maamulka leh ee Zanzibar oo dadka degan ay 99% yihiin Muslimiin. Waxay ka baxday jaamacadda Manchester ee dalka UK oo ay dhaqaalaha ka bartay, waxayna sidoo kale wax ku baratay Zanzibar Institute of Financial Administration iyo Mzumbe University o sanadkii 1986 ay ka qaadatay Shahaadda Diploma ee Public Administration.
Waxay madaxweyne ku xigeen ahayd ilaa sanadkii 2015, waxaana hadda lagu wadaa inay dhammeystiro xilliga ka harsanaa 5 tii sano ee mar labaad la doortay madaxweynaha Geeriyooday oo ay ka hartay 4 sano iyo Bar. Magufuli ayaa kaliya qaatay 5 bilood muddo xileedkii labaad ee loo doortay Novembar sanadkii hore 2020.
Dadka Kirishtaanka ah ee Tanzania ayaa u badan inay ka horjeedaan xilka madaxweynaha inay muddo dheer sii heyso haweeneydan Samiya Suluhu, waxayna olole u geli doonaan in doorasho guud dalkaasi laga qabto.
Waa xaas u dhaxda ninka lagu magacaabo Hafid Amiir, waxayna u dhashay saddex wiil iyo gabar. Gabadha ay dhashay ee Mwanu Hafid waa siyaasad raacday hooyadeed, waxayna ka mid tahay Baarlamaanka Zanzibar.
Samia Suluhu Hassan waxay taariikh cusub ka geli doontaa Afrika iyo dunida, xilliga ay noqotaba inay xilka sii joogto.
Samiya Suluhu Hassan
Previous articleMaxaa keenay khilaafka u dhaxeeya Siciid Deni iyo Axmed Qoorqoor..? (Kaalinta uu Farmaajo ku lahaa)
Next articleGuddigii Farsamada Shirkii Baydhaba oo mar kale la isugu yeeray iyo shir uga furmay magaalada Muqdisho